The Free State of Glory (Nkebi nke 54): Ụbọchị Dị Mma Gafere, Nkebi nke 3
TEXT: Mkpughe 22: 12-21
12 Ma, lee, m ga-abịa ngwa ngwa; na ụgwọ ọrụ m dịnyeere m, inye onye ọ bụla dịka ọrụ ya ga-adị.
13 Abụ m Alfa na Omega, mmalite na njedebe, ndị mbụ na nke ikpeazụ.
Ngọzi nādiri ndi nēdebe ihe nile O nyere n'iwu, ka ha we nwe nkpuru-obi nke ndu, ka ha we ba nime ọnu-uzọ-ama rue obodo.
N'ihi na n'èzí ka ndi-nkita, na ndi-dibia, na ndi nākwa iko, na ndi-ob͕u-madu, na ndi nākpọ isi ala, na onye ọ bula nke nāhu n'anya, nke nēme kwa okwu-ugha.
16 Mu onwem bu Jisus ezitewo mọ-ozim ka o we b͕ara unu àmà ihe ndia nime nzukọ nile. Abụ m mgbọrọgwụ na mkpụrụ Devid, kpakpando ụtụtụ na-enwu gbaa na ụtụtụ.
17 Mmụọ na nwaanyị a na-alụ ọhụrụ na-asị, Bịa. Ka onye nuru we si, Bia. Ka onye nke akpiri nākpọ nku bia. Ma onye ọ bula nke nāchọ, ka o were miri nke ndu ahu n'efu.
N'ihi na mu onwem nēgosi madu ọ bula nke nānu okwu nile nke amuma nke akwukwọ a, si, Ọ buru na onye ọ bula gātukwasi ihe ndia, Chineke gātukwasi ya ihe-otiti nile edeworo n'akwukwọ a:
19 Ma ™ b®r® na onye ™ b®la ga-ewep®ta okwu nile nke akw®kw ™ nke am®ma a, Chineke ga-ewep® ak®k ™ ya site n'akwuk® nke nd®, na site n'obodo ns ™ ah®, na site n'ihe nd∫ ah® edeworo n'akw®kw ™ a.
20 Onye nāb͕a àmà ihe ndia nāsi, N'ezie Mu onwem nābia ngwa ngwa. Amen. Ya mere, bia, Onyenwe anyi Jisos.
21 Ka amara nke Onye-nwe-ayi Jisus Kraist diyere unu nile. Amen.
Na ozi ikpeazụ anyị, anyị nọgidere na-ele anya òkù ahụ dị egwu nke Jizọs Kraịst ka ndị di na nwunye 'Bịa' na nkwa ahụ na ụbọchị ka mma. Ndị nsọ nke oge Jọn chọrọ ozi nke olileanya a; ụwa anyị taa chọrọ ozi olileanya a; na ụwa nke e buru n'amụma banyere Mkpughe ga-achọ ozi ozi olileanya a. N'akụkụ ozi nke olileanya anyị nwere òkù ka anyị bịa "Bịa." "Mmụọ," nke bụ Mmụọ Nsọ, kwuru, sị, "Bịa." Mana John dere na "Nwunye" na-asị, "Bịa."
Nwunye ahụ bụ Chọọchị, ahụ nke Kraịst. Anyị ekwesịghị ịnakwere ọkpụkpọ òkù maka onwe anyị, ma anyị kwesịrị ịgafe ya. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, e deela ọtụtụ ihe ma kwuo banyere ụdị ozi ahụ bụ Nwunye, Chọọchị, na-eziga n'ụwa. Kedu ihe anyị na-ekwu? Ụfọdụ na-asị "bịa" na "kụrụ mkpụrụ" n'ime ozi a ma ị ga-enwe ego n'ụba. Ụfọdụ na-ekwu "bịa" ma gọọmenti maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị a nke anyị chọrọ. Ụfọdụ na-ekwu "bịa" na chọọchị anyị, ị ga-enwe obi ụtọ ma dị mma.
Ma, mgbe anyị na-asị, "bịa," anyị kwesịrị ịpụta otu ihe ahụ Mmụọ pụtara. Warren Wiersbe na-ede, sị, "Ndị kwere ekwe kwesịrị ịkpọ ndị mmehie furu efu ka ha tụkwasị Kraịst obi ma ṅụọ mmiri nke ndụ FREELY N'ezie, mgbe ụka nọ na-atụ anya nloghachi Kraist, àgwà dị otú a na-akpali ọrụ na ozi ọma na obi dị ọcha. ịkọrọ ndị ọzọ amara nke Chineke: ezi nghọta nke amụma BIble kwesịrị ịkpali anyị irube isi n'Okwu Chineke ma soro ụwa nke furu efu kpọọ òkù Chineke. "
Anyị kwesịrị ịgafe na òkù nke Jizọs Kraịst na Mmụọ Nsọ. E nwekwara ọtụtụ oge ime nke ahụ. Ozi chọọchị ahụ nye ndị ejidere ihe mkpasu egwu mmekọahụ nke afọ gara aga bụ, "Bịanụ, ka Kraịst gwọọ ọnyá gị." "Bịa, ka Kraist gbanwee obi obi gị." Nye ndị metụtara nsogbu opioid, anyị na-asị, "Bịanụ ka Kraịst kwatuo ebe ahụ siri ike ná ndụ gị." Nye ndị ahụ funahụrụ ezinụlọ ha na-eme ihe ike na ọdachi ndị na-emere onwe ha n'afọ a, anyị na-asị, "Bịanụ, ka Kraịst kasie gị obi na obi nkoropụ gị." Nye ndị na-efu ọrụ ha, ọrụ ha, ụgwọ ọrụ ha, ma ọ bụ ihe ị nwere, anyị na-asị, "Bịanụ, ka Kraịst nye gị ndụ dị ụba." Nye ndị ụwa ike gwụrụ, mkpụrụ obi na-arịa ọrịa, anyị na-asị, "Bịanụ, nata nzọpụta, mmekọrịta nke Chineke, na ebe obibi dị n'eluigwe."
Bianu, unu onwe-unu, ebe ọ bula unu nāda jijiji,
Bịanụ n'ebe mkpuchi ahụ, gbuo ikpere n'ala.
N'ebe a weta obi ndi obi ojoo.
Ụwa enweghị iru uju nke eluigwe na-enweghị ike ịgwọ.
Lee lee achịcha nke Ndụ, lee mmiri na-asọ
Si n'ocheeze Chineke bia, nke di n'elu.
Bịanụ oriri nke ịhụnanya; bia, mgbe ị mara
Ụwa enweghị iru újú kama eluigwe apụghị ịgwọ.
Chọọchị, ị ga-akpọ òkù ahụ taa? Ndị mmehie, ị ga-anata òkù taa? Kraist na-ekwu, "Bịakwutenụ m, unu nile ndị na-adọgbu onwe unu n'ọrụ na ndị a na-ebogbu ibu, m ga-emekwa ka unu zuru ike ... Bịanụ, unu ga-ahụkwa izu ike nye mkpụrụ obi unu."
Kwe ka m gosi gị otu ị ga - esi zuru ike n'ime mkpụrụ obi gị site n'ịnọkwasị okwukwe na ntụkwasị obi na Jizọs Kraịst.
Ndị Rom 10: 9 & 13 na-ekwu, sị, "Ọ bụrụ na ị ga-eji ọnụ gị kwupụta Onyenwe anyị Jizọs, ma ị ga-ekwenye n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị ... N'ihi na onye ọ bụla nke ga-akpọku aha Onyenwe anyị ga-azọpụta. "